Bokin' i Hôsea - Wikipedia
Ny Bokin i Hôsea na Bokin' i Ôsea dia boky ao amin’ ny Baiboly hebreo (Tanakh) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Ahitana taratra ny tantaram-pivavahan’ ny Fanjakana tany Avaratr' i Israely sy ny fivoaran’ ny jodaisma io boky io. Voalohany amin’ ireo bokim-paminaniana roa ambin’ ny folo, atao hoe "mpaminany madinika", noho ny hafohin’ ny asa-sorany, io boky io. Ny hevi-dehiben’ ny boky dia ny fitiavan’ i Iahveh ny vahoakany izay asehon’ny fanambadian’i Hôsea (na Ôsea) an’ ilay vehivavy janga atao hoe Gômera. Hentitra ny fomba fitenin’ i Hôsea manoloana ny vahoaka miaina amin’ ny fomba sy fanao izay miseho lany hatrany ho mifanohitra amin’ ny finoana an' i Iahveh sy ny lalàny.
Ny mpaminany Hosea, nataon'i Duccio di Buoninsegna, anelanelan'ny taona 1308-1311
3.1 Fizaràna voalohany (toko 1 - 3)
3.2 Fizaràna faharoa (toko 4 - 14)
4 Ireo lohahevitra lehibe
5 Fampiasana ny boky ao amin’ny Testamenta Vaovao
5.1 Ao amin'ny Filazantsara
5.2 Ao amin’ ireo Epistily
Atao hoe nosoratan’ i Hôsea (na Ôsea) ny boky. Nefa tsapa fa ny toko faha-4 hatramin’ny faha-13 dia hoatry ny nosoratr’olo-maro. Tsy mitovy amin’izay hita ao amin’ny toko telo voalohany sy ny toko faha-14 ny fomba fonoratra ao. Agamba avy any amin'ny Fanjakana Avaratra i Hosea. Nanomboka tokony ho tany amin’ny faramparan’ny fanjakan’ i Jerôbôama II (782 – 753 tal. J.K.) ny asa fitoriana nataony. Nahatonga an'i Hosea hahalala bebe kokoa ny fitiavan’Andriamanitra ny olony, na dia be fahotana aza, ny fitiavany ny vadiny izay be fahadisoana.
Voasoratra tamin’ ny taonjatofaha-8 tal. J.K., tao amin' ny tanin’ i Jodà, rehefa rava i Israely, ny boky manontolo.
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר הוֹשֵׁעַ / Sefer Hôshēa‘ ny Bokin' i Hôsea. Ao amin' ny Septoajinta amin' ny teny grika izy dia atao hoe Ὡσηέ Αʹ / I Hôsêé (ny alfa Αʹ dia manambara ny maha mpaminany madinika laharana voalohany azy).
Misy toko 14 ny Bokin’ i Hôsea ary azo zaraina roa, ka ny voalohany manomboka eo amin’ ny toko voalohany hatramin’ ny toko faha-3. Ny toko sisa rehetra (faha-4 hatramin’ ny faha-14) dia an’ny fizaràna faharoa.
Fizaràna voalohany (toko 1 - 3)Hanova
Ny toko voalohany hatramin’ ny faha-3 dia milaza ny fiainam-panambadian’ i Hôsea tamin’ i Gômera, izay vehivavy mpijangajanga. Ampitahain’ i Hôsea amin’ ny fifandraisan’ Andriamanitra amin' i Israely ny fifandraisany amin’ ny vadiny. Io fanambadiany io dia heverin’ ny mpanao heviteny maro ho manana heviny ara-panoharana no sady mitantara tokoa ny zavatra mahazo ny mpaminany.
Maneho ny mpanao tsikera sasany fa ny maha ara-panoharana ny zavatra sasantsasany ao amin’ny toko telo voalohany dia mifandray amin’ny anaran’ ny zanaky ny mpaminanay, izay midika hoe "ilay tsy tiana" sy "ilay tsy oloko". Ny fanekem-pihavanana eo amin’ Andriamanitra sy i Israely, izay niorina tamin’ny lalàna tamin’ ny voalohany, dia fifamatorana ara-panahy miorina amin' ny fitiavana ihany koa. Voantitra mafy amin’ny fampiasana teny tsy tokony hampiasaina ivelan’ny fitiavana ara-nofo izany fomba fijery izany.
Raha i Hôsea na Andriamanitra no ilay vady voahitsakitsaka, ny vadiny na i Israely kosa no ilay vehivavy janga. Io vehivavy io sy ny taranany dia ho faizina, nefa isaky ny manota izy dia voavela heloka hatrany (toko faha-3), satria resin’ny fitiavana ny hatezerana.
Fizaràna faharoa (toko 4 - 14)Hanova
Ny toko faha-4 hatramin’ny faha-13 dia faminaniana fohy maro mifanarakaraka momba ny fiharatsiana ara-panahin’ny vahoaka, ny fahalemena ara-pitondran-tenan’ireo mpanjaka sy ireo mpisorona ary ireo mpaminany izay miteraka ny fitsarana sy ny fanasaziana avy amin' Andriamanitra. Avy eo misy ireo tonon-kira izay mamisavisa ny helok’ i Israely tany aloha. Ny amin’ny loza izay mananontanona no hevitra mibahana indrindra ao amin' io fizaràna io.
Ao amin’ ny toko faha-14 (andininy faha-4-8) vao mihamalefaka ny fomba fitenin’ ny mpaminany Hôsea izay milaza faminaniam-pamonjena sy famindram-po ho an’ ireo izay matahotra an’ i Iahveh sy ireo olona marina.
Ireo lohahevitra lehibeHanova
I Hôsea no mpaminany voalohany nampiasa ny fanambadiana ho fomba fanambaràna ny fifandraisana misy eo amin’Andriamanitra sy i Israely. Izany lohahevitra izany dia miseho fanindroany ao amin’ny Bokin' i Ezekiela (toko faha-16). Hita matetika izany lohahevitra izany taty aoriana tao amin’ny teôlôjia kristiana. Ny fitiavan' Andriamanitra tsy mety ritra (Hôs. 11) dia hita koa ao amin’ny tenin’ ny mpaminany Jeremia tao Jodà tamin’ny nampananontanona ny fanafihan’ny firenena fahavalony an’ity fanjakana ity. Miavaka anefa i Hôsea noho ny fanandratany avo ny fitiavana izay sitrak’ Andriamanitra lavitra noho ny fanatanterahana sorona ary ny fahalalana an’i Iahveh no ankasitrahana fa tsy ny fanatitra dorana aterina aminy (Hôs. 6.6).
Fampiasana ny boky ao amin’ny Testamenta VaovaoHanova
I Hosea dia matetika ampahatsiahivina ao amin’ ny Filazantsara ary indroa i Jesoa Kristy no mamerina izany: ao amin’ ny Filazantsara araka an' i Matio (9.13), i Jesoa dia mampahatsiahy ny Hôs. 6.6; ao amin’ny Filazantsara araka an' i Lioka (23.30) dia tsiahiviny koa ny Hôs. 10.8.
Ao amin’ ireo EpistilyHanova
Ny Apôstôly Paoly ao amin’ ny Epistily ho an' ny Rômana (9.25-26) sy ao amin'ny Epistily voalohany ho an' ny Kôrintiana (15.55) ary ny Epistily voalohan' i Petera (2.10) dia mampahatsiahy soratra avy ao amin’ny Bokin’i Hosea (Hôs. 1.10; 2.23; 13.14).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Hôsea&oldid=1041924"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 05:48
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 05:48 ity pejy ity.